Philips Kettle HD4677/20 ~ ICT.com.mm
HomePhilips Kettle HD4677/20
The unique ”one cup indicator” feature of this stylish designed Philips kettle HD4677/20 allows you to boil only the water you need. Therefore, you can easily save up to 66% energy and... [Learn more]
Brand: PHILIPSSKU: 71177N/ASee more: Benchtop Appliances, Lifestyle, New Arrivals, Philips, Products, Shop, Under 100kFilter by: Kettles
The unique ”one cup indicator” feature of this stylish designed Philips kettle HD4677/20 allows you to boil only the water you need. Therefore, you can easily save up to 66% energy and reduce your impact on environment
ရေဆူလာချိန်မှာ အလိုအလျောက် ပိတ်ပေးတဲ့စနစ်ပါဝင်တဲ့ Philips အမှတ်တံဆိပ် ရေနွေးအိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ရေပမာဏ 1.7 L အထိ ဆန့်ဝင်ပေမဲ့ မိမိလိုသလောက်နဲ့လည်း အသုံးပြုနိုင်တာကြောင့် စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုကို 66% လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ ရေနွေးငွေ့အဖုံးက ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ အလိုအလျောက်ပွင့်လာမှာဖြစ်လို့ ရေနွေးငွေ့အပူအဟပ်ခံပြီး အဖုံးဖွင့်နေစရာမလိုတော့ပါဘူး။ ပါဝါအားကောင်းပြီး သန့်ရှင်းတဲ့ Stainless Steel အပူပေးပြားကို တပ်ဆင်ထားတာကြောင့် အချိန်တိုအတွင်း ရေဆူစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေဆူလာတဲ့အခါမှာ အလိုအလျောက်ခလုတ်ပိတ်သွားမှာဖြစ်ပြီး ဘဲလ်မြည်သံနဲ့ အချက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခလုတ်ဖွင့်/မဖွင့်ကို အချက်ပြတဲ့ LED indicator ပါဝင်ပြီး ရေနွေးအိုးကို အသုံးပြုနေတယ်ဆိုရင် မီးလင်းပြနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အိုးရဲ့ ဘယ်ရောညာမှာပါ ရေပမာဏပြတဲ့ indicator အကြည်ကြောင့် ဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့် အိုးထဲမှာရှိတဲ့ ရေပမာဏကို အလွယ်တကူ သိရှိနိုင်ပါတယ်။ 360 ဒီဂရီလှည့်ပတ်နိုင်တဲ့ အထိုင်ခွက်က ရေနွေးအိုးကို အလွယ်တကူမယူ/တပ်ဆင်နိုင်စေပါတယ်။ အမှုန်အမွှားတွေကို စစ်ထုတ်ပေးတဲ့ filter ပါဝင်တာကြောင့် သင့်ရဲ့ ခွက်ထဲကရေနွေးဟာ လုံးဝသန့်ရှင်းပါတယ်။ ရေဆူတာနဲ့ အလိုအလျောက်ပိတ်တဲ့ လုံခြုံရေးစနစ်တွေကို ထည့်သွင်းပေးထားတာကြောင့် သတိမေ့တတ်တဲ့သူတွေအဖို့ မီးဘေးအန္တရာယ်အတွက်ကိုလည်း စိတ်ချရစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Hinged lid with large opening for easy filling and cleaning, also avoiding steam contact. The stainless steel concealed element of the Philips kettle ensures fast boiling and easy cleaning. Bell sounds when your water has reached boiling point. The cord can be wrapped around the base, so that the kettle is easy to place in your kitchen.
This item: Philips Kettle HD4677/20 K95,000